ट्वीटरमा अल्पसंख्यकलाई डर- विचार - कान्तिपुर समाचार
ट्वीटरमा अल्पसंख्यकलाई डर
भारतमा दलित तथा जातीय, धार्मिक, आदिवासी र लैंगिक अल्पसंख्यकलाई सत्तारूढ दलका उग्र कार्यकर्ताले सताउने गरेका छन् ।
मंसिर २०, २०७५ थेनमोजी साउन्दराराजन
काठमाडौँ — नोभेम्बर १३ मा ट्विटरका प्रमुख कार्यकारी ज्याक डोर्सेले नयाँ दिल्लीमा महिला पत्रकार तथा अधिकारकर्मीसँग भेट गरेर भारतमा अनलाइन सुरक्षाबारे कुराकानी गरे । धर्म तथा संस्कृतिका आधारमा अल्पसंख्यामा रहेका महिला पत्रकार तथा अधिकारकर्मीले डोर्सेको सामाजिक सञ्जालमा निकै हैरानी खेप्नुपर्छ ।
डोर्से तथा ट्विटरका अन्य उच्च अधिकारीहरूसँगको छलफल उत्पीडनमा परेकाहरूको समस्या समाधान गर्न सहयोग गर्नु तथा भारतको समस्याको तहलाई बुझ्नु रहेको थियो ।
मेरी सहकर्मी संघापली अरुणा ‘प्रोजेक्ट मुक्ति’ नामक संस्था सञ्चालन गर्छिन् । उक्त संस्थाको काम सामाजिक सञ्जालबाट दलितहरूको न्यायका पक्षमा आवाज बुलन्द पार्नु हो । उनी पनि उक्त छलफलमा सहभागी थिइन् । ‘दलित’ शब्दको अर्थ ‘दबाइएको’ भन्ने हुन्छ, जसले हिंसा, उत्पीडन र आमनागरिक सरहको अधिकारबाट पनि वञ्चित जाति बुझाउँछ ।
डोर्सेलाई भेटेका बेला उनले असुरक्षाका कारण ट्विटरबाट आफूलाई अलग राखिसकेकी थिइन् । उनको ट्विटका कारण उनलाई विभिन्न प्रकारको धम्की आइसकेको थियो । जब उनले आफूमाथि भएको हिंसा र उत्पीडनबारे सुनाइन्, तब ट्विटरकी कानुन, नीति, विश्वास र सुरक्षा विभाग प्रमुख विजया गाड्डे सुँक्सुकाइन् । सत्तारुढ दलका ट्रोल सेनाले हरेक दिन दलित र अन्य भारतीय अल्पसंख्यकलाई ट्विटरमा सताइरहेका हुन्छन्, जसका कारण उनीहरूले कित ट्विटर चलाउनै छोड्छन्, नभए ट्रोल सेनाको आँखाको तारो भइरहन्छन् ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उनको पार्टी भातीय जनता पार्टीले सन् २०१४ को आमनिर्वाचनमा व्यापक प्रयोग गरेपछि भारतमा ट्विटरलाई राजनीतिक डिस्कोर्सको माध्यमका रूपमा हेर्न थालिएको हो । मोदी सत्तासिन भएपछि उनका समर्थकले ट्विटरलाई सरकारले गरेका सकारात्मक काम प्रचार गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । उनीहरूले तोडमोड गरिएका तस्बिर पनि प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।
भारतमा केही समययता अल्पसंख्यक तथा दलितमाथि अत्याचार र धार्मिक तथा जातीय हिंसामा वृद्धि भएको देखिएको छ । त्यसमा प्राय: सबैले प्रधानमन्त्री मोदीका समर्थकलाई दोषी देखिरहेका छन् । उनीहरूमा आफ्नो दलले बहुमत पाएको उन्माद छ । त्यसैले ट्रोल सेना जातीय र धार्मिक अल्पसंख्यकमाथि सजिलै खनिन्छन् ।
विश्वले अमेरिकाको ट्रोल संस्कृति र गोराहरूको अधिपत्यलाई बुझिसकेको छ । भारतमा भने जातीय आधारमा अनलाइनमा गरिने ट्रोलको अध्ययन भइरहेको छ । यस प्रकारको छलफल हुँदा दलितका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता जरुरी हुन्छ । उनीहरूले के भोगिरहेका छन् भन्ने थाहा पाउनैपर्छ । वास्तविक दुनियाँमा होस् वा अनलाइनमा, दलितहरू जातीय अत्याचारको भुंग्रोबाट मुक्ति चाहन्छन् ।
यसै सन्दर्भमा मैले एउटा पोस्टर डिजाइन गरेर अरुणालाई दिएकी थिएँ । उनले त्यो पोस्टर डोर्सेलाई दिइन् । पोस्टरमा एक महिलाले विरोध गरिरहेको देखाइएको छ र त्यसमा लेखिएका छन्– ध्वस्त पारौं । ब्राह्मणवाद । पितृसत्ता ।
ब्राह्मण जातीय हिसाबमा ‘सबैभन्दा माथिल्लो’ जातमा पर्छन् र लामो समयदेखि शक्ति उनीहरूकै अधीनमा छ । उनीहरूको संयुक्त आवाजले कुनै पनि सार्वजनिक छलफल र विचारलाई निर्देशित गर्छ । चाहे त्यो सामाजिक सञ्जालमा होस् या इतिहासमा । उनीहरूको पहुँच भारतको पुरानो संरचनाभन्दा पनि परसम्म फैलिएको छ ।
उक्त पोस्टर दलितको प्रतिरोध कला र उनीहरूप्रति ऐक्यबद्धताको नमुनामात्रै हो । जब नयाँदिल्लीको छलफल सकियो, डोर्सेले मैले बनाएको पोस्टर बोकेर सहभागीसँग तस्बिर खिचाए । जातीय र पितृसत्तात्मक सोचको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने मागको समर्थन ट्विटरले गरेको छ भन्ने प्रमाणको रूपमा त्यस तस्बिरलाई हेरियो ।
त्यसपछि ट्विटरमा भारतका जातीय इलिटहरू, त्यसमा पनि अधिकांश ब्राह्मणले कडा प्रतिक्रिया जनाए । डोर्से र उनको टिमले गालीगलौच सामना गर्नुपर्‍यो । उनलाई नश्लवादी तथा भारतीय सामाजिक स्थितिलाई खलल पुर्‍याउन चाहने व्यक्तिका रूपमा चित्रण गरियो । त्यसलाई २०१९ मा हुने आमनिर्वाचनसम्म पनि जोडियो ।
ब्राह्मणहरूले ‘बाइकट ट्विटर’लाई ट्रेन्डिङ गरिदिए ।
डोर्सेप्रति मेरो सहनुभूति छ । उनले दलित महिला भएर ट्विटर चलाउँदाकै जस्तो नमिठो स्वाद चाख्नुपर्‍यो । यस आक्रमणले भारतमा अनलाइन सुरक्षाको अवस्था अध्ययन गर्न आएको उनको टोलीलाई समस्याको गहिराइ पनि अवगत गराइदियो ।
भारतमा लगभग ८० लाख ट्विटर प्रयोगकर्ता छन् र ट्विटरका लागि यो सबैभन्दा छिटो बढिरहेको बजार पनि हो । हरेक दिन बढिरहेको ट्विटर प्रयोगकर्तामा दलित तथा धार्मिक, सांस्कृतिक र लैंगिक अल्पसंख्यक पनि पर्छन् । भारतमा दलितको मात्रै संख्या २६ करोड हाराहारी छ । उनीहरूका लागि ट्विटर आफ्नो कुरा निसंकोच राख्न सकिने माध्यम हो । यहाँ भनिएका कुरा मुख्य मिडियाले पनि सुन्छन् ।
भारतको जातीय संरचना र शक्ति ट्विटरमा पनि देखिन्छ । जसका कारण अल्पसंख्यकहरू उक्त सञ्जालबाट टाढै बस्न बाध्य हुन्छन् ।
ट्विटरका प्रतिनिधिहरूले पनि त्यस प्रकारको उत्पीडन भोगे । ब्राह्मणहरूले ट्विटरलाई बाइकट गर्न आह्वान गरेपछि ट्विटरकी कानुन, नीति, विश्वास र सुरक्षा विभाग प्रमुख विजया गाड्डेले तस्बिरको विषयलाई लिएर माफी मागिन् । उनले ट्विटर निष्पक्ष मञ्च भएकाले भविष्यमा यस प्रकारको कार्य गर्दा आफूहरूले ध्यान दिने बताइन् । ट्विटरले क्षमायाचना गर्नुले समस्या कुन तहमा छ भन्ने स्पष्ट देखियो । ट्विटर घुँडा टेकेर आफू निष्पक्ष र बहसका लागि खुला मञ्च रहेको बताउन बाध्य भयो ।
ट्विटरमा जातलाई केन्द्रमा राखेर गरिने दुव्र्यवहार र हिंसालाई देखेर पनि ट्विटरले नदेखे जस्तो गर्नु दुर्भाग्य हो । उक्त मञ्चको जिम्मेवारी भने खुला बहसलाई बढावा दिनुमात्र नभई आफ्नो विचार राख्ने स्वतन्त्रतालाई पनि सुरक्षा दिनु हो । चरणबद्ध रूपमा गरिने आक्रमणले उत्पीडनमा रहेकाहरूलाई चुप लागेर बस्न बाध्य बनाउँदै लगेको छ भने ट्विटरलाई अत्याचार गर्ने अर्को अस्त्र बनाउँदैछ ।
ट्विटरकै प्रमखु कार्यकारीले भोगेको अत्याचार वा हिंसालाई उदाहरणका रूपमा लिएर उनीहरूको समूहले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक मनन गर्न आवश्यक छ । ट्विटरले भारतमा मात्रै नभई विश्वभर रहेका अल्पसंख्यकको आवाजलाई सुरक्षा प्रदान गर्न कदम चाल्नैपर्छ ।
ट्विटरले जातीय हिंसा वा घृणायुक्त अभिव्यक्तिलाई तुरुन्तै रिपोर्ट गर्न मिल्ने संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ । उसले छुट्टै एउटा समिति बनाएर ट्विटरमा मानव अधिकार कुण्ठित पार्ने कार्यको समीक्षा गर्नु जरुरी छ । भारतको ट्रोल पनि समीक्षा गर्दै त्यसले कस्तो सूचना प्रवाह गरिरहेको छ भनेर ध्यान दिनुपर्छ ।
डोर्से र उनका सहकर्मीले सरकार, नागरिक समाज र सबै अल्पसंख्यक समूहका प्रतिनिधिसँग छलफल गरी एउटा नीति तयार गर्नुपर्छ । यस प्रकारको छलफलबाट विभिन्न प्रकारका समस्या र तिनका समाधानका उपाय पहिल्याउन सकिन्छ । तर ट्विटरले आफूलाई पिछडिएको वर्गहरूले पनि आवाज उठाउने स्थानका रूपमा विकास गर्न चाहन्छ या चाहँदैन, त्यसमा भने स्पष्ट हुनुपर्छ ।
लेखक एक दलित–अमेरिकी कलाकार र अभियन्ता हुन् । उनी इक्वालिटी ल्याब्सकी संस्थापक पनि हुन् ।
(न्युयोर्क टाइम्सबाट अनुदित ।) प्रकाशित : मंसिर २०, २०७५ ०८:०१
अगहन आइल, जन मोटाइल
मंसिरमा जग्गावालले सुनको सपना देख्थे, बनिबुतो गरेर खानेले पनि ढुक्कले दुई छाक खान सक्थे । धान कटाइ महोत्सवजस्तै हुन्थ्यो ।
मंसिर २०, २०७५ चन्द्रकिशोर
काठमाडौँ — लोकगीत समाजको हृदयको उद्गार हुन्छ । यो तिनका हार्दिक भावनाहरूको साँचो प्रतीक हुन्छ । लोकगीत जनसमाजको वस्तु हो । त्यसमा जनताको हृदय संँगालिएको हुन्छ । यी गीतहरू अनुभवका आधारमा रचिएका हुन्छन् । यसभित्र त्यस क्षेत्रको संघर्ष, प्रेम, भूगोल र सिर्जनशीलतालाई आफूभित्र संँगालिएको हुन्छ ।
त्यसैले लोकगीतभित्र छिरेर सामाजिक इतिहासलाई खोज्न सकिन्छ । मधेसी समाजकै एउटा बारहमासा लोकगीतका यी पंक्ति हेरौं, ‘अगहन कुँअरी करत सिंगार, कपडा सिलावेली सोना के तार/पाठ पितामर पुलक समान, कनक सिस वैजयन्ती के माल’ । यसको आशय हो, मंसिर महिनामा कुनै नायिका आफूलाई सुनका गहनाहरूले सजाउँछिन् ।
लोकगीतमा एउटी नायिका मंसिर महिनामै सुनका गहनाले सजिएको सन्दर्भ किन उठ्छ होला ? आफू उत्तानो परेर पैतालामा सानो बच्चालाई बसाइ जब गाइन्थ्यो, ‘घुघुवा माना उपजे धाना, बच्चा के छेदा देव कान दुनु सोना’ । (धान फल्यो भने सुनको गहना हाल्दिन्छु ।) यसले के देखाउँछ भने धान यति फल्थ्यो कि त्यसबाट सुनको गहना हाल्न मिल्थ्यो ।
एउटा उखान छ, ‘अगहन आइल, जन मोटाइल’ । अगहन भनेको मंसिर महिना हो । ज्यालाबनी गरेर खानेहरू पनि अगहन महिनामा मोटाउँछन् । जग्गावाल गिरहतले त सुनको गहनाको सपना देख्थे । बनिबुतो गरेर खानेले पनि अगहनमा यति भित्र्याउँथे कि उनीहरू ढुक्कले दुई छाक खान सक्थे । यसैले पनि होला, धानरोपनी जस्तै ‘धान कटाइ’ पनि महोत्सवकै रूपमा हुन्थ्यो ।
धान काटिने बेला उब्जनी हुने चौरमा गुलजार हुन्थ्यो । कतै दुलदुल घोडाको लोकनाट्य देखाइँदै त कतै बाइस्कोपमार्फत घर बसी–बसी सारा संसार दर्शन गरिन्थ्यो । कतै देहाती परिकार टाउकामा राखेर बेच्नेहरू आली–आली भौंतारिन्थे । बच्चाहरूका लागि पनि रमाइलो, चाहे त्यो गिरहतका हुन वा कृषि मजदुरका । धान काटेर बोझा बनाई खलिहानमा ओसारिसकेपछि खेतमा छरपस्टिएर रहेका धानका बाला उनीहरू संकलन गर्थे र मनचित्ते परिकार र खेलौना किन्थे ।
अगहनीकै अभिन्न अंग थियो खलिहान, जहाँ दाइँ गर्न बीचमा मेह (दाइँ का खाँबो) गाडिएको हुन्थ्यो । खलिहानकै छेउछाउमा पानी नजमोस् भनेर ‘परालको टाल’ राखिन्थ्यो । यसलाई कुन्युँ, माच, टौवा पनि भनिन्छ । यो त्रिकोणीय, चतुष्कोणीय, वृत्ताकार, पिरामिडीय आदि तरिकाले राखिन्थ्यो । कृषि कर्मका प्रत्येक पक्षमा कला र सौन्दर्य थियो ।
यसको संख्या र आकार घट्दै जानुले खेती किसानीको स्तर प्रस्ट्याउँछ । पहिले छोरीको बिहेका लागि घर खोजी गरिँंदा खलिहान र कुन्युँका आधारमा बेहुलाको सामाजिक र आर्थिक हैसियत आँकलन गरिन्थ्यो । जसको बार्‍हैमास केही न केही उब्जनी भइराख्छ भने उसको खलिहान सधैं धपक्क बलिरहेको मानिन्थ्यो ।
कुन्युँ नहल्लियोस् नढलोस् भनेर सजाइन्थ्यो । गाईवस्तुले तानेर खाँदा पनि जोगियोस् । झरीले पराल नसडोस् वा हुरीले नहुत्याओस् । यो कलामा इलाकाभर नामी बलरा नगरपालिका–४ का रामबली सहनीले यो सीप बुबाबाट सिकेका थिए । रामबली भन्छन्, ‘कुन्युँ ठड्याउँदा चारवटै कुनामा समान रूपमा अग्ल्याउँदै लग्नुपर्छ । पातलो तह गरी पराल हाल्दै जाने र त्यसलाई बाँसको लठी र लात्तीले थिचिमिची पार्नुपथ्र्यो । परालका पत्रहरू बाक्लिएर बस्नाले कुन्युँलाई मजबुत बनाउँथ्यो ।’
कुन्युँ बनाइराख्दा अलिकति पनि चुक भयो भने त्यो ढल्थ्यो, गाईवस्तु थिचिन सक्थे वा मानिस किचिन सक्थे । यस्ता घटना भएका छन् । अहिले सहरियाहरू खेत खलिहानबाट टाढा छन्, तर अगहनीलाई सम्झिराखेका छन् । गुदगुदाउँदो परालमाथि लडिबुडी गर्नु बाल्यकालको रमाइलो थियो ।
अहिले कसैले भन्ला, परालको आकारले किसानको स्तरलाई मापन गर्न मिल्दैन कि ? यो प्रश्न सापेक्षिक रूपमा ठिक हो । अहिले पराल अन्य प्रयोजनमा पनि बिक्री/उपयोग हुनथालेको छ । पहिला किसानसँंग गाईवस्तु पनि हुन्थे, जसका लागि खाद्यान्न जोहो गरेर राखिराख्नुपथ्र्यो । किसानले उब्जनी कम हुनसक्ने वर्षका लागि पनि जोगाउँथे ।
कतिपय ठाउँमा बेहुली पक्षलाई अर्काको कुन्युँ देखाएर झुक्याइएका कथाहरू सुन्न पाइन्छ । जसको आफ्नो जग्गा छैन वा भए पनि पानी जम्ने छ भने पोखरीको डिलमा लहरै कुन्युँ ठड्याउँथे । कसैको दलान अगाडि कुन्युँ र भकारीको लहरै देखिँंदा ऊ प्रशस्त उब्जाउ जग्गावाल हो भनी मानिन्थ्यो । कसै–कसैको महिनौंसम्म दाइँ भइराख्थ्यो । दाइँका लागि एकाबिहानै काम सुरु भइहाल्थ्यो र त्यसैसँंग गुञ्जिन्थे लोकगीतका भाकाहरू । यी विवरण अहिले कतिपयलाई ‘फ्लास ब्याक’जस्तो लाग्ला ।
पिँंधमा रहेका किसानको अवस्था पछिल्ला दुई दशकमा तीव्रगतिले फेरिएको छ । मुलुक राजनीतिक संक्रमणमा रहेको बखत बहुसंख्यक जनताको जीविकाको प्रमुख आधार खेती गर्ने तरिका र त्यसप्रतिको सामाजिक दृष्टि पनि संक्रमणबाट गुज्रियो । राजनीतिक संक्रमणको खुब चर्चा गरियो, गरिँदैछ । तर खेती प्रणालीमा आएको संक्रमणबारे खासै बहस देखिँदैन ।
खेती न पूर्णतया पारम्परिक छ, नत आधुनिक हुनसकेको छ । प्रविधिका नाममा फगत ट्रयाक्टरको प्रयोग भएको छ । ट्रयाक्टरले बैल र हरवाहलाई विस्थापित गरे पनि खेतीमा मानवीय श्रम संलग्न छ नै । खेतीमा किसानको सोचाइ, बुझाइ र गराइमा समयसँंगै बदलाव आउँदै जानुपर्ने हो । परम्परा र आधुनिकता बीचमा दृष्टिपूर्ण तालमेल कसरी हुनुपर्ने हो, त्यो कुनै कोणबाट सार्थक हस्तक्षेप भइरहेको छैन ।
खेतीमा प्रविधीकरणको मतलव ‘ट्रयाक्टरीकरण’ पनि ठानिएको छ । खेतीको तौरतरिकालाई सहज र कम खर्चिलो बनाउन अन्य मेसिन प्रयोगमा ल्याउनुपर्नेमा केवल ट्रयाक्टरको प्रयोग बढी देखिएको छ । कृषि प्रविधिसंँग जोडिएका साना–साना मेसिनहरू छन्, जसले बिउ छर्नेदेखि दाइँ गर्नेसम्ममा सघाउ पुर्‍याउन सक्छन् । त्यसैगरी अधिक उत्पादनका निम्ति भइरहेको अराजक रसायनमुखी खेतीलाई विराम दिन सकिएको छैन । किसानमा जानकारी र सीप फिँजाउन जरुरी छ ।
हाम्रो समाजमा कृषि संस्कृतिकी आमा थिइन् । मेसिनीकरणको अत्यधिक मोहमा जनशक्ति कम प्रयोग हुँदै जाँदा एकातिर लाभका ठाउँहरू त देखिन्छन्, त्यहींनिर संस्कृतिका ऊर्जाशील परम्परा लुप्त हुँदै जाने जोखिम पनि थपिएको छ । अहिले कृषि संस्कृतिको जग हल्लिएको छ । कहाँ जान लागिएको हो, भेउ छैन । कतै खेतीकर्म अँध्यारो सुरुङको यात्रा त होइन ? खेती यो समाजका निम्ति फगत जीविकाका आधार मात्र थिएन । यहाँको प्राकृतिक परिवेशमा जीवनयापन गर्ने सुविचारित पद्धति पनि थियो ।
धान बेचेर सुनको गहना किन्ने कुरा अहिले दिवास्वप्न जस्तो लाग्छ । धान उत्पादन वृद्धि नहुँदा वार्षिक अर्बौं रुपियाँको चामल आयात हुँदै आएको छ । कुनै जमानामा निर्यातका लागि प्रसिद्धि कमाएको क्षेत्र आयातमाथि बाँच्न अभिशप्त छ । विगतका तथ्यहरूले के भन्छन् भने राष्ट्रिय निर्यातमा पैंसठी प्रतिशत कृषि क्षेत्रको योगदान थियो । नेपालको कुल निकासीमा चामलको मात्र देन चालिस प्रतिशत थियो ।
नेपालमा २०३१ सालमा धान–चामल निर्यात गर्न कम्पनी स्थापना गरिएको थियो । ती कम्पनीहरू तराईमै थिए । मृणमोय मजुमदारले डेढ दशकअघि आफ्नो शोधमा लेखेका थिए, ‘मधेसको आधारभूत आर्थिक अवसरलाई जोकोहीले पनि नराम्रो मान्नुपर्ने अवस्था छ । नेपालमा यस्तो विभेद किन भएको होला ? मधेसमा यस्तो चरम अविकसित अवस्था किन रहेको होला ? मधेसका मानिस किन यति बढी गरिब भएका होलान् ?’
फ्रेडरिक गेजले ‘रिजनालिजम एन्ड न्यासनल युनिटी इन नेपाल’ किताबमा सन् १९७५ तिरै तराईको आर्थिक महत्त्ववारे प्रकाश पारेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘सन् १९६० को दशकसम्ममा तराई नेपालको आर्थिक मेरुदण्ड भइसकेको थियो । नेपालका आर्थिक रूपले सक्रियमध्ये ९४ प्रतिशत मानिस जीविकोपार्जनका लागि कृषिमा निर्भर छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अनुमान अनुसार आर्थिक वर्ष १९६४/६५ मा ६५ प्रतिशत कुल गार्हस्थ उत्पादन कृषि क्षेत्रबाट प्राप्त भएको थियो ।’ उनी अगाडि लेख्छन्, ‘तराईको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उत्पादन धान हो । खाद्यान्न अभाव हुने नेपालका पहाडी भेगमा ठूलो परिमाणमा तराईबाट चामल लगिन्छ । तराईको धान भारतमा समेत ठूलो परिमाणमा निर्यात हुन्छ । १९६५ मा ३ लाख ४८ हजार मैट्रिक टन धान तराईबाट भारत निर्यात गरिएको अनुमान गरिन्छ । त्यस वर्ष नेपाल विश्वको पाँचौं ठूलो धान निर्यात गर्ने देश भएको थियो ।’
वर्तमान कहाँ छ ? ‘चामल कि धान’को भन्सार आयातकर बढी लगाउने रस्साकस्सीमा यतिखेर अल्झिएका छौं । यो अवधि कम चुनौतीपूर्ण छैन, जब देशको पेट भर्न बाहिरबाट अनाज मगाउनुपरेको छ । सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा पाँच वर्षभित्र कृषि उत्पादन दोब्बर बनाउने लक्ष्य छ । संक्रमणमा रहेको खेतीको सवाल हल नगरेसम्म सुनौलो धान उब्जाएर सुनको बिहान उदाउने किसानी सपना सकार नभए जस्तै सरकारी प्रतिबद्धता पुरा नहुने छाँटकाँट देखिन्छ ।
प्रकाशित : मंसिर २०, २०७५ ०७:५७